•Sicela ukufuniswa ubaba kaMbuso Zuma, owayezalwa uBusisiwe Phakamile Zuma wakwaSwayimane, Estezi, ongasekho emhlabeni. Sicela onolwazi athintane nosonhlalakahle uMnu MI Madonsela (New Hanover Office) ku 033 502 0074.
•UMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi ucela ukufuniswa abazali baka-Olwethu Thusi okungoNeli Thusi benoMthobisi Ngcobo. Abanolwazi bathinte usonhlalakahle u-N. Dlamini enombolweni ethi 033 392 8642.
•UMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi eMgungundlovu ucela ukufuniswa ubaba ka-Elihle Phungula (owazalwa zingama-2008/03/15) kanye noThalente Phungula (owazalwa zingama-2003/10/08) abahlala noninakhulu wabo e-Ashdown. Ongaba nolwazi angathintana nosonhlalakahle uLungile Nxumalo enombolweni ethi 033 392 8600.
•I-SAVF Social Services icela ukufuniswa umama kaThabiso Tsepo Dlomo owazalwa mhla zingama-24 kuNhlolanja (Fubruary) 2002. Ubaba wakhe nguSlindele Robert Dlomo owashona ngowezi-2011. Ongaba nolwazi uyacelwa ukuba axhumane nosonhlalakahle uMbali Buthelezi osebenzela emahhovisi e-SAVF Social Services akuPrince Alfred Street, eMgungundlovu, ku-033 342 1229.
•I-SAVF Social Services icela ukufuniswa ubaba womntwana wakwaSkonyela ozalwe ngomhlaka-15 kuNtulikazi (July) kuwo lo nyaka. Umama womntwana nguThandeka Skonyela odlule emhlabeni ngomhlaka-16 kuNtulikazi (July) kuwo lo nyaka. Sicela ongaba nolwazi axhumane nosonhlalakahle uMbali Buthelezi e-SAVF Social Services emahhovisi aku-Prince Alfred Street, eMgungundlovu, enombolweni ethi 033 342 1229.
• I-SAVF Social Services icela ukufuniswa abazali baka-Unathi Qhawe Mlaba owazalwa ngomhlaka-5 kuNcwaba (August) kuwo lo nyaka. Umntwana lona watholakala e-Locker Room e-Edendale Mall. Abazali bomntwana abaziwa. Sicela ongaba nolwazi axhumane nosonhlalakale uMbali Buthelezi e-SAVF Social Services emahhovisi aku-Prince Alfred Street, eMgungundlovu, enombolweni ethi 033 342 1229.
•Ihhovisi licela ukufuniswa abazali baka-Alwande Dlamini owazalwa zingu-11/12/2017. Umama wakhe kuthiwa nguSphindile Rita Dlamini ongaziwa ukuthi ukuphi kanti ubaba wakhe akaziwa ukuthi ungubani. Kucelwa onolwazi ngabazali balo mntwana axhumane nosonhlalakahle uNkk Nomusa Zondi kulezi zinombolo 033 502 2160 noma 033 502 2175 ngezikhathi zomsebenzi.
•Ihhovisi licela ukufuniswa ubaba kaSibongakonke Ayabonga Mchunu owazalwa zingu-28/07/2010 kanye noJunior Okuhle Lungelo Mchunu owazalwa zingu-06/07/2017. Umama wabo kwakunguBusisiwe Jannet Mchunu obehlala endaweni yaseThokozani ongasekho emhlabeni kanti ubaba wabo akaziwa ukuthi ungubani wakuphi nendawo. Kucelwa onolwazi ngabazali bala bantwana axhumane nosonhlalakahle uNkk Nomusa Zondi kulezi zinombolo 033 502 2160/033 502 2175 ngezikhathi zomsebenzi.
•Ihhovisi licela ukufuniswa abazali bakaThalente Mahlaba owazalwa zingu-21/10/2017. Umama wakhe nguZanele Mahlaba obehlala e-Ottos Bluff ongasaziwa ukuthi ukuphi kanti ubaba wakhe akaziwa ukuthi ungubani. Kucelwa onolwazi ngabazali balo mntwana axhumane nosonhlalakahle uNkk Nomusa Zondi kulezi zinombolo 033 502 2160/033 502 2175 ngezikhathi zomsebenzi.
•I-SAVF Social Services icela ukufuniswa ubaba ka Rocky Blue Brycen Robberts owazalwa zingu-17/12/09. Ongaba nolwazi uyacelwa ukuba axhumane nosonhlalakahle u-Wilma Wiid emahhovisi ase-SAVF Social Services aku-Prince Alfred Street, eMgungundlovu, enombolweni ethi 033 342 1229.
•I-SAVF Social Services icela ukufuniswa abazali baka-Enzokuhle Nkomo owazalwa zingu-19/10/2018. Umama wakhe nguNozipho Nkomo. Ongaba nolwazi uyacelwa ukuba axhumane nosonhlalakahle uMbali Buthelezi e-SAVF Social Services emahhovisi aku-Prince Alfred Street, eMgungundlovu, ku-033 342 1229.
•I-SAVF Social Services icela ukufuniswa abazali bakaMandisa Gasa. Igama likamama wakhe nguNokuphiwa Tholakele Gasa, ongaziwa ukuthi ukuphi. Onolwazi angathinta usonhlalakahle uNks V. Zondi enombolweni ethi 033 342 1229.
•I-SAVF Social Services icela ukufuniswa abazali bakaSphesihle Gwala. Igama likamama wakhe ngu-Busisiwe Gwala, igama likababa ngu- Sibusiso Sibande . Onolwazi angathinta usonhlalakahle uNks V. Zondi enombolweni ethi 033 342 1229.
•Sicela ukufuniswa umama ka-Ayabonga Zibuyile Ngubane ozalwa nguZanele Mncwabe owagcinwa ehlala eMbali Unit 14. Onolwazi sicela axhumane nosonhlalakahle uNgcobo kule nombolo 033 392 8648.
•I-Child and Family Welfare icela ukufuniswa uThobani Madlala ongubaba kaLuyanda Mbhele . Umama kaLuyanda kwakunguNonhle Mbhele ongasekho emhlabeni. Onolwazi kucelwa athinte usonhlalakahle uNohlanhla Ndlela ku-033 342 8971.
•I-Child and Family Welfare icela ukufuniswa ubaba ka-Amahle Zondi. Umama ka-Amahle kwakunguThandeka Primrose Zondi ongasekho emhlabeni. Onolwazi kucelwa athinte usonhlalakahle uNonhlanhla Ndlela enombolweni ethi 033 342 8971.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaLonda Memela okungu Sfiso Ngcobo ongaziwa. Umama wakhe uConstance Memela ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNduli enombolweni ethi 033 392 8600.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Asanda Mchunu. Igama likamama kwakunguBongekile Mchunu kanti ubaba yena kuthiwa uPhat Ndaba. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uZinhle Gwala enombolweni ethi 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaLonathemba Sithole kanye noSenzo Sithole owagcina ukubonakala e-Elandskop eZondi Store. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNkk S.F. Memela enombolweni ethi 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaSnakhokonke Mbona. Igama likamama wakhe uSamukelisiwe Mbona ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNkk S.F. Memela enombolweni ethi 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Andiswa Zondi owagcina ukubonakala endaweni yaseHopewelll. Umama wakhe kwakunguSimangele Zondi ongasekho emhlabeni owayengowase-Elandskop eZondi Store. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNkk S.F. Memela enombolweni ethi 033 505 0083.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaMandisa Zondi ozalwa uSlindile Zondi wasendaweni yaseDalton ongasekho emhlabeni.
Igama likababa alaziwa. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uZama Mbambo enombolweni ethi 033 502 2188.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaNonduduzo Zondi ozalwa uThangithini Mzila waseMsinga ongasekho emhlabeni. Igama likababa uBhekani Zondi waseMtulwa, ongaziwa ukuthi wayaphi nokusolwa ukuthi usadlula emhlabeni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNks N.F. Dlamini enombolweni ethi 033 502 2173.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaWendy Chamane ozalwa uSyvia Chamane. Igama likababa alaziwa. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uSli Cele enombolweni ethi 033 5022 161.